प्रेममा, प्रेम विवाहमा वा मागी विवाहमा कसरी सक्षम हुने ? – Puleso
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ प्रेममा, प्रेम विवाहमा वा मागी विवाहमा कसरी सक्षम हुने ?
प्रेममा, प्रेम विवाहमा वा मागी विवाहमा कसरी सक्षम हुने ?
पुलेसो १३ पुस, २०७८, मंगलबार ९:५०
जीवनका २ दुर्भाग्य : (१) एउटाले आफूले प्रेम गर्ने जीवनसंगी पाउँदैंन (२) अर्कोले आफूले प्रेम गर्ने जीवनसंगी पाउँछ । भनिन्छ, दोस्रो दुर्भाग्य बढी खराब हुन्छ । शायद कुनै पनि दोष नभएको न श्रीमान हुन्छ न त श्रीमती हुन्छ, भन्न खोजेको होला । त्यसो भए प्रेममा, प्रेम विवाहमा वा मागी विवाहमा पनि कसरी सफल हुने :
धेरै महत्वाकांक्षी नहुनुस् र सबै इच्छा पूरा हुन सक्दैनन् भन्ने तथ्यलाई स्वीकार्नुस् ।
मैेले भनेकै हुुनुपर्छ भन्ने जिद्धी नगर्नुस् । प्रेमसम्बन्ध सुमधुर राख्न वा विवाह सफल पार्न दुवैको समझदारी चाहिन्छ ।
आफूभित्र पनि कमजोरी छ कि ? आफ्नो दोष छ कि ? हेर्ने गर्नुस र आफ्नो दोष सुधार्ने प्रयास गर्नुस् ।
कुनै दोष नभएको श्रीमान वा श्रीमती हुँदैन, यस्तै हो, ‘अगाडि बढौं’ भन्ने गर्नुहोस ।
अन्त्यमा जर्ज गर्जिफको भनाईलाई राख्न चाहन्छु– ‘एक मानव लामो समयसम्म एकै रहँदैंन, उ निरन्तर परिवर्तन हुन्छ, उ आधाघण्टा पनि एकैरहन सक्दैन ।’ (अ म्यान इज नेभर दि सेम फर लङ, हि इज कन्टिन्युअल्ली चेन्जिङ, हि सेल्डम रिमेन्स दि सेम इभन फर हाफ एन आवर)